Ambatomaro : Zaza 2 taona maty nokaikerin’ny alika -
AccueilSongandinaAmbatomaro : Zaza 2 taona maty nokaikerin’ny alika
Ambatomaro : Zaza 2 taona maty nokaikerin’ny alika
Nitrangana toe-javatra mampalahelo teny Ambatomaro ny harivan’ny sabotsy 14 Aprily, tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany. Izay nahazoam-baovao fa zaza kely manodidina 2 taona sy tapany no maty noho ny kaikitry ny alika tao amin’ny trano fonenany. Lehilahy iray manodidina ny 30 taona noho izany no voasaringotra ho tompon’antoka tamin’ny tsy fandraisana andraikitra tamin’ity zazakely vao roa taona monja ity. Nosamborin’ny polisy avy hatrany ny lehilahy raha vao naharay ny fitarainana nataon’ny ray aman-drenin’ny niharam-boina ny mpitandro filaminana. Fantatra tamin’izany mantsy fa mpiambin-tanàna ao amin’ireo olona nametraka fitoriana ireo ity lehilahy voatondro ho nahavanon-doza ity, izay nahazoana tatitra tamin’izany fa nisy disadisa teo amin’ity rangahy mpiambina tanàna sy ny vadiny tonga tany amin’io toeram-piasany io, izay noho ny antony ara-bola ary tao no nampihitatra ny ady. Somary efa mamo ihany ralehilahy ka nampihorohoro ity farany tamin’ireo alika masiaka tao an-tanàna, ninia tsy natahotra izany koa ilay ramatoa vadiny ka nihantsy ady taminy ary nilaza ho tsy matahotra na ho vahana amin’ny tadiny aza ny alika. Tsy izany anefa no niseho fa niteraka zava-doza satria tamin’ny fotoana namoahana ny tady no vaky nitsoaka teny am-baravarankely ramatoa vadiny, ka ilay zaza irery no tavela tao amin’ny trano. Tamin’izany no norombasan’ny alika ilay zaza, raha nihikiaka avy any ivelany no hany sisa afaka nataon’ireto mpivady tompon’antoka, izay voalaza fa mbola niezaka nanome baiko ity alika hipetraka. Nentina tany amin’ny hopitaly ihany taorian’izay ity zaza niharan-doza ity saingy tsy tana intsony ny ainy.
Diana kaikitra 6 teo amin’ny hatony
Nahitana ireo diana kaikitra miisa enina ny hatony ary efatra kosa teo amin’ny tendany, izay voalaza fa nitarika ny fahafatesany haingana, hoy hatrany ny mpitsabo nanao ny fitsirihana ity zazakely tra-doza ity. Hita nanerana ny vatany ihany koa tamin’izany ny rangotr’ilay alika izay tao amin’ny lamosiny sy tarehiny. Ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahatelo no nisahana ny fisamborana ity rangahy nahavanin-doza ity raha nentina avy hatrany natao fanadihadiana teny amin’ny polisy misahana ny ady heloka bevava kosa izy taorian’izay. Natolotra ny fampanoavana omaly ity farany, ary niaiky sy nibaboka ny helony nandritry ny fakana am-bavany azy, ary notanana eny Tsiafahy.